Ngaba ukuthengisa umsitho kukonyusa njani ukuKhokelela kweRhafu kunye neRhafu?
NgoMgqibelo, ngoJuni 10, 2017 Douglas Karr
Iinkampani ezininzi zichitha ngaphezulu kweepesenti ezingama-45 zentengiso yazo kunye nohlahlo-lwabiwo mali kwintengiso yomnyhadala kwaye elo nani liyanda, alinciphi ngaphandle kokuthandwa kwentengiso yedijithali. Akukho mathandabuzo engqondweni yam ngamandla okuzimasa, ukubamba, ukuthetha, ukubonisa, kunye nokuxhasa iminyhadala. Uninzi lwezona zikhokelo zixabisekileyo zabaxumi bethu ziyaqhubeka nokuza ngokwazisa-uninzi lwazo kwimisitho. Yintoni ukuThengisa uMnyhadala? Ukuthengisa umsitho ngu